1 Petro – Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)
Category Archives: 1 Petro
1 Petro, mupostori waJesu Kristu, Kuvasanangurwa vaMwari, vatorwa munyika, vakapararira muPondasi yose, neGaratia, neKapadhokia, Ezhia neBhitinia, 2 vakasarudzwa maererano nokuziva zviri mberi kwaMwari Baba, kubudikidza nebasa roMweya rokuvaita vatsvene, kuti vateerere kuna Jesu Kristu nokusaswa neropa rake: Nyasha norugare ngazviwande kwamuri. Mwari ngaarumbidzwe nokuda kweTariro Mhenyu 3 Mwari, Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, ngaarumbidzwe! Nengoni […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 PetroLeave a comment on 1 Petro 1
1 Naizvozvo, muzvidzore pane zvakaipa zvose namanomano ose, nokunyengera, negodo, nokureva kwose. 2 Savacheche vachangoberekwa, pangai mukaka wakachena womweya, kuti mugokuriswa nawo muruponeso rwenyu, 3 sezvo makaravira zvino kuti Ishe akanaka. Ibwe Benyu naVanhu Vakasanangurwa 4 Sezvamunouya kwaari, iye Ibwe Benyu, rakarambwa navanhu asi rakasarudzwa naMwari uye rinokosha kwaari, 5 nemiwo, samabwe mapenyu, muri kuvakwa […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 PetroLeave a comment on 1 Petro 2
Vakadzi naVarume 1 Saizvozvo nemiwo vakadzi, muzviise pasi pavarume venyu kuiitira kuti, kana mumwe wavo asingatendi shoko, angadzorwa namafambiro avakadzi vavo pasina shoko rarehwa, 2 pavanoona kuchena nokuremekedzwa kwoupenyu hwenyu. 3 Runako rwenyu ngarurege kubva pakushonga kwokunze, kwakadai sebvudzi rakarukwa uye nokushonga zvishongo zvegoridhe nenguo dzakaisvonaka. 4 Asi, runofanira kuva rwomunhu womukati, iko kunaka kusingaori […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 PetroLeave a comment on 1 Petro 3
Kuraramira Mwari 1 Naizvozvo, sezvo Kristu akatambudzika mumuviri wake, nemiwo muzvishongedze nomurangariro iwoyo, nokuti uyo akatambudzika mumuviri wake akarega chivi. 2 Nokuda kwaizvozvo, haagari upenyu hwake hwose hwapanyika pakuchiva kwavanhu kwakaipa, asi mukuda kwaMwari. 3 Nokuti nguva yakapfuura yakaringana kare yamakapedza muchiita kuda kwavahedheni yamairarama muutere, kuchiva, kudhakwa, kutamba kwakaipa, kuraradza nokunamata zvifananidzo zvinonyangadza. 4 […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 PetroLeave a comment on 1 Petro 4
Vakuru naVaduku 1 Kuvakuru vari pakati penyu, ndinokumbira hangu somukuru pamwe chete nemi, nechapupu chamatambudziko aKristu, uye somumwewo achazogovana navo mukubwinya kuchazoratidzwa ndichiti: 2 Ivai vafudzi veboka raMwari riri pasi penyu, muchibata savatariri, musingazviiti nokuroveredzwa, asi nokuda kwokuti munoda, sezvinodikanwa naMwari kuti muve; musingakariri mari, asi muchishingaira pakushanda; 3 musingaremedzi vaya vakaiswa kwamuri, asi muve […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 PetroLeave a comment on 1 Petro 5